Sambava Tovovavy telo tratra nivoaka tao anaty fasana
Raha dahalo hatrany no heverin’ireo mpitandro ny filaminana any Ambalamanasy Toamasina fa hifanehitra aminy amin’ny alina noho ny tsy fandriampahalemana dia hafa kely ny nitranga ny alin’ny sabotsy teo.
Tovovavy telo garbati mantsy no tratran’izy ireo nivoaka avy tao anaty fasana. Tokony ho tamin’ny 02 ora maraina tany ho any no nitrangan’izany. Mbola tsy fantatra mazava moa hatreto na mpamosavy izy telo mirahavavy ireto ka nikasa hanao inona. Tsy niboridana mantsy izy ireo tamin’ny fotoana nahatrarana azy.